python Archives - Saturngod
Why Python in Programming Basic Book ?
Posted on Updated March 1, 2019 March 1, 2019 by saturngod
Programming basic စာအုပ်မှာ python နှင့် အဓိကထားပြီး ရေးထားပါတယ်။ Programming မှာ language ထက် အရေးပါတာကတော့ logic ပါ။ looping ဘယ်လိုပတ်မယ် ဘာကြောင့် ပတ်သင့်တယ်။ if condition ကို ဘယ်လို ရေးသင့်တယ်။ စသည့် အခြေခံ ကျသည့် တွေးခေါ်မှု က လိုအပ်တယ်။ ဥပမာ * ** *** **** ***** လိုမျိုး basic ကို တစ်ကြောင်းစီ ရိုက်ထုတ်လည်း အဖြေထွက်တာပဲ။ ဘာကြောင့် looping သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားတတ်ဖို့ လိုတယ်။ Programming basic စာအုပ်မှာ အခြေခံ အကျဆုံး အပိုင်းတွေတာ ထည့်သွင်းထားတယ်။ python […]
Get All Todos List from Basecamp 3
Posted on Updated December 18, 2018 December 18, 2018 by saturngod
Basecamp မှာ အဓိက ပြဿနာက tasks list အကုန်လုံးကို တစ်နေရာတည်းမှာ ကြည့်မရတာပဲ။ ဒါပေမယ့် API အပြည့်အစုံပေးထားတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် python နဲ့ ရေးပြီး ထုတ်လိုက်တယ်။ Basecamp API မှာ ပြဿနာ နောက်တစ်ခုက အဆင့်ဆင့် ထုတ်နေရတာပဲ။ Projects အားလုံးထဲက todo setname ကို ရှာရတယ်။ setname ကနေ တဆင့် todo sets ကို ယူရတယ်။ ပြီးမှ todo တွေကို ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်။ code ကတော့ ခက်ခက်ခဲခဲ မဟုတ်ပေမယ့် API ကို နားလည်အောင် အချိန်ပေးပြီး ဖတ်လိုက်ရတယ်။ https://github.com/saturngod/basecamp3-getall-incomplete-todo မှာ ကျွန်တော် code ကို တင်ထားပါတယ်။ […]
Posted on Updated August 28, 2016 by saturngod
Programming Basic စာအုပ်မှာ Python ကို အသုံးပြုပြီးရေးထားတော့ website ပေါ်မှာ python code run အောင် ဘယ်လို လုပ်ထားသလဲ ဆိုပြီး မေးကြတာ တွေ့ပါတယ်။ Python ကို website တွေမှာ run ဖို့ အတွက်ကတော့ brython ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Gitbook ကို အသုံးပြုထားသည့် စာအုပ်ထဲမှာ ရေးဖို့ကတော့ brython တစ်ခု တည်းမရတော့ပါဘူး။ Editor လေးပါ ပြချင်တာကြောင့် Ace editor နဲ့ တွဲပြီး သုံးထားပါတယ်။ CodeMirror ကို Gitbook မှာ အသုံးပြုလို့ မရပါဘူး။ require js library ကြောင့် conflict ဖြစ်နေပါတယ်။ […]
Mangareader.net to ebook
Posted on Updated January 31, 2013 March 19, 2012 by saturngod
Manga တွေကို Nook Simple Touch ထဲမှာ ထည့်ဖတ်ဖို့အတွက် epub file format သို့မဟုတ် PDF format မှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ iPad , iPhone တို့မှာလို app တွေ မရှိတဲ့အတွက် သီးသန့် image တစ်ခုခြင်းဆီကို download ချရပါတယ်။ ဒါနဲ့ github မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ mdl ဆိုပြီး ruby နဲ့ ရေးထားတာ တွေ့ပါတယ်။
Posted on Updated May 16, 2011 May 16, 2011 by saturngod
Python ကို သဘောကျပြီး နောက်ပိုင်း CLI program တွေကို python နဲ့ ပဲ ရေးဖြစ်တော့မယ်။ သောကြာနေ့တုန်းက snipplr.com က snippets တွေကို files တွေ အနေနဲ့ ပြန်ခွဲထုတ်ဖို့ program ကိုလည်း python နဲ့ ပဲ ရေးဖြစ်တယ်။ Web App တစ်ခုကိုလည်း python နဲ့ ရေးဖို့ စဉ်းစားနေတော့ Django ကို သွားသတိရတယ်။ မနေ့ကတော့ တနေကုန် Django ဖတ်ဖြစ်တယ်။ Django က လက်ရှိ PHP နဲ့ တော်တာ်ကွာတယ်။ သွင်းရတာ လွယ်တယ်။ testing server လည်း ပါပြီးသားမို့ Apache တို့ Nginx […]
Posted on Updated April 25, 2011 April 24, 2011 by saturngod
Python ZG To Uni Converter
Posted on Updated January 11, 2011 January 11, 2011 by saturngod
Hi Saturn, I am attaching the lastest file with html2utf8 conversion and windows standalone exe file inside the dist folder. Ko Thiha, please also test for me if the windows exe works. Thanks. The html2utf8 conversion will convert &#4096; to but will not convert name html entities like &lgt; &copy; etc which is useful in an html […]
Posted on Updated September 3, 2009 by saturngod
ကျွန်တောှတို့ code တွေကို အခြားသူတွေကို mail နဲ့ပို့တဲ့အခါ အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ fb , twitter တို့လို မှာ ဖောှပြဖို့ကလည်း ခက်တယ်။ ကိုယ့်စက်ထဲက code တစ်ခုလုံးကိုလည်း blog ထဲမှာ သီးသန့် သွားမရေးချင်ဘူး။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လေး လုပ်ချင်တယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ python framework django နဲ့ရေးထားတဲ့ sPaste ရှိပါတယ်။ http://www.copypastecode.com က ကျွန်တောှ့ code တွေကို spam လို့သတ်မှတ်ပြီး တင်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။